နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
ပစ္စည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 100နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 150နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 200နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 240နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 300နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 360နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 100-305နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120-160နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 3000-6500နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး -30နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
Installation diameter φ60mm standard
Protection against electric shock grade class 2
Lamp Details & Product Performance
● Whole lamp body is aluminum alloy material,
● Impact-resistant, pure polyester electrostatic spray coating, corrosion-resistant Wide voltage AC100-277V
● High power LED chips, high quality ,super brightness, high efficiency and long lifespan.
● LED Module, and drive can replace individually.
● Cover opening power-off protection, safety and reliable .
● Adjustable sleeves, two install way, meet different install request .
● All screws are 304 stainless steel material
● The design is simple and fashionable, integrating with the modern urban environment
● The integrated design achieves strong structure, light weight, easy installation, disassembly and replacement
● Green environment protection light source, low temperature and no harmful ultraviolet rays;
● The integrated design is beneficial to the heat dissipation of the lamp,and the accumulated dust can be easily taken away by wind or rain
● Modular pluggable design ,easy to tool maintenance;
● Provide professional visual comfort and safety lighting products ;
● Widely applicable to any outdoor lighting places such as roads,ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်
Mounting Height Advice
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့် 100% ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်: 2008 ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်&ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့် 15 ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။4ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ .
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။4ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။:
1. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
2. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
3. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
4. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။.
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 5-7 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 1-2 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, 10ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 4-6 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။.
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။. သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ 1-3 သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ 0.2%.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။. သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
အမှတ်အသားများ (Tags)：All in One Solar Street light Manufacturer, ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီနှင့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။, Solar Flood Light Manufacturer, solar street light price
LED UFO အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဆိုလာဥယျာဉ်မီး IP65 ရေစိုခံ အလူမီနီယမ်အိမ်နှင့် တစ်ခုတည်းသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး 9000 LED UFO အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဆိုလာဥယျာဉ်မီး IP65 ရေစိုခံ အလူမီနီယမ်အိမ်နှင့် တစ်ခုတည်းသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး